एेश्वर्याका अगाडि अभिषेक बच्चनले करिश्मा कपूरलाई किन नदेखे झैँ गरे ? - Jhapa Online
एेश्वर्याका अगाडि अभिषेक बच्चनले करिश्मा कपूरलाई किन नदेखे झैँ गरे ?
उद्योगमा सलमान खान र ऐश्वर्या रायबीचको ब्रेकअपको जति चर्चा भएको थियो त्यति नै चर्चा ऐश्वर्या रायका श्रीमान् अभिनेता अभिषेक बच्चन र अभिनेत्री करिश्मा कपूरको इन्गेजमेन्ट तोडिएको खबरले पाएको थियो ।
इन्गेजमेन्ट टुटेपछि अभिषेक र करिश्मा दुवैले एकअर्कासँग भेटघाट र बोलचाल नै बन्द गरेका थिए । हालै अमिताभ बच्चनकी छोरी श्वेता बच्चनले क्लोदिङ्ग ब्राण्ड सुरु गरेकी छिन् । त्यसै ब्राण्डको शुभारम्भमा बच्चन परिवारका साथै बलिउडका कैयौं स्टार कलाकारहरु उपस्थित थिए । कार्यक्रममा करिश्मा कपूरलाई पनि आमन्त्रित गरिएको थियो । कार्यक्रममा करिश्मा कपूर कालो रंगको पोशाकमा सजिएर गएकी थिइन ।
कार्यक्रममा अभिषेक श्रीमती ऐश्वर्याका साथ उपस्थित भएका थिए । अभिषेक मिडिया सामु ऐश्वर्याका साथ पोज दिइरहेका थिए भने करिश्मा उनीहरुको नजिकै उभिएकी थिइन् । तर अभिषेकले करिश्मालाई देखेर पनि नदेखेझैं गरेर त्यहाँबाट हिंडे । त्यसैबेला एक्ली करिश्मालाई अभिषेककी दिदी श्वेताले साथ दिइन् । उनले करिश्माको हात थाम्दै मिडिया सामु फोटोशुट पनि गरिन् । तर करिश्मालाई यसरी साथ दिइरहेकी श्वेताले आफ्नै भाइबुहारी ऐश्वर्याको कुनै मतलब गरिनन् ।
यही कारण श्वेतालाई आफ्नै बुहारी ऐश्वर्याभन्दा गहिरो मित्रता करिश्मासँग भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा हाँसोको विषय बनेको छ । कार्यक्रममा करिश्माले शाहरुख खान, सञ्जय कपूर र चंकि पाण्डेका छोरीहरु क्रमश सुहाना खान, शनाया कपूर र अनन्या पाण्डेका साथ पोज दिइन् । कार्यक्रममा करिश्माबाहेक अमृता अरोरा, अथिया शेट्टी र कियारा आड्वाणी पनि उपस्थित थिए । साथै अमिताभ बच्चन र जया बच्चन रोयल अवतारमा उपस्थित भएका थिए ।